Hamro Kantipur | मंगलबारको राशिफल मंगलबारको राशिफल
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ श्रीसूर्योदक्षिणायने हेमन्त ऋतु राक्षसनामक संवत्सर वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष ७ गते तद् अनुसार सन् २०२१ नोभेम्बर २३ तारिख मंगलबार मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग बब करण ५ः२६ पर कौलब करण आनन्दादिमा चर योग चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः३२ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः७ मा हुनेछ । मंगलचौथी व्रत ।
मेष – स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार आउनेछ । प्रेम सम्बन्ध तथा दाम्पत्यसुखको योग छ । आयआर्जन होला । मनोकूलको काम बन्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । साहसिक कार्यमा रुचि बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति ऐश्वर्य बढ्ला ।
वृष – समय राम्रो भए पनि खर्च बढ्न सक्छ । विवाद पर्न सक्छ, सोचविचार गरी कार्य गर्नुहोला । मिठो भोजन प्राप्त होला । मान महत्व आरोग्यता बढ्नेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ ।
मिथुन – अधुरा काम बन्नेछन् । ठूला व्यक्तिबाट बुद्धिको तारिफ हुनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । मिहीनेत वृद्धि हुनेछ । ऋण, रोग र शत्रुसितको कुरामा अनुकूलता आउनेछ । नयाँ काममा सफलताको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ला । उन्नति हुनेछ ।
कर्कट – नसोचेको काम बन्न सक्छ । अर्थलाभको योग छ । लगानी बढ्नेछ । बढी परिश्रमले प्रगति हुनेछ । भागदौड बढ्ला । रसरागको कार्यमा प्रयासरत रहनुहुनेछ । व्यवसायिक पक्षसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काममा सफलता मिल्नेछ । आफ्नै बल विवेकले काम बन्नेछ ।
सिंह – यात्रामा विशेष लाभ होला । जीवनसाथी र आमाको सल्लाहबाट गरेको काम शुभ र लाभप्रद सावित हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । मान महत्व पुरस्कार मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्ला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । साहसिक कर्ममा रूचि बढ्ला । शुभ समाचार मिल्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नेछ ।
कन्या – आर्थिक संकट पर्न सक्छ । घरेलु समस्याले सताउने दिन छ । साहसिक काममा भने सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । कुनै पनि शारीरिक र आर्थिक जोखिममा नपर्नु उचित रहला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा लाग्नु बेस हुनेछ र सफलता पनि मिल्नेछ । इष्टमित्र सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।
तुला – गलत विचारले काममा बाधा पैदा गर्न सक्छ । समयको बचत कमै होला । धनको आगमन भने भैरहनेछ । भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । मान पुरस्कार आदिमा बिघ्नबाधाको डर रहला । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
वृश्चिक – प्रेमको बन्धनमा बाँधिने योग छ । रोकिएका कम बन्नेछन् । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । साथीभाइले राम्रै सहयोग गर्लान् । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । मित्रजनको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सन्ततिसुख बढ्नेछ ।
मकर – यात्रामा सावधानी अपनाउनुहोला । लेनदेनको समस्याले सताउन सक्छ । खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुहोला ।
कुम्भ – कुरा काट्नेहरू प्रशंसक बन्नेछन् । जागिर र व्यापारमा सन्तोषप्रद अवस्था रहला । धन यश मान सुख समृद्धि बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मीन – हौसला बढ्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नेछ । आय वृद्धि होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान मिल्नेछ । गौरवमा बढोत्तरी हुनेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्ला । आरोग्यता बढ्नेछ ।